Dadka cudurka Corona ugu dhintay dalka Mareykanka oo ka sare maray 700,000.
Saturday October 02, 2021 - 10:15:03
Waxaa sare ukacay khasaaraha ka dhashay caabuqa Covid19 caalami ahaa iyadoona khatartiisu ay wali ka jirto inta badan wadamada caalamka.
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in caabuqa Carona Virus uu dalkaasi ku dilay dad ku dhow halmalyan uu ruux islamarkaana uu si maalinle ah usoo ridanayo labaatameeyo kun.
aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa sheegay in tan iyo markii uu Biden talada qabtay uu sii yaraanayay halista uu Covid19 ugeysanayo bulshada American-ka ah.
Jaamacadda Johns Hopkins ayaa tirakoob ay soo saartay ku sheegtay in dadka American-ka ah ee Covid19 udhintay ay ka badanyihiin 718,984 taas oo ka dhigan in Mareykanku uu wali kujiro kaalinta koobaan ee dalalka caalami ahaan ladhiban Coronka Virus.
Dalalka ugu dhimashada badan caabuqa Covid19 ayaa kala ah Mareykanka,Baraaziil, Hindiya iyo Meksiko.